Man United oo dooneysa iney Arsenal, Chelsea iyo Real Madrid ka dul qaado saxiixa weerayahanka kooxda Juve. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Man United oo dooneysa iney Arsenal, Chelsea iyo Real Madrid ka dul qaado saxiixa weerayahanka kooxda Juve.
Man United oo dooneysa iney Arsenal, Chelsea iyo Real Madrid ka dul qaado saxiixa weerayahanka kooxda Juve.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 8-06-16 1:40 PM Manchester United ayaa lasoo tabinayaa iney wado qorshe ay dalab 47 Milyan oo Ginni ugu gudbineysa kooxda Juventus iyada oo ka dooneysa weeraryahankooda Alvaro Morata.
23 sano jirkan ayaa Juventus kaga soo biiray labo xagaa ka hor kooxda Real Madrid, waxaana lala xiriirinayaa saxiixiisa kooxo dhowr ah oo ay hor kacayan Arsenal iyo Chelsea.
Real Madrid ayaa sidoo kale lasoo tabinayaa iney wado qorshe ay dib ugu soo ceshaneyso ciyaaryahankeeda iyada oo diyaar la ah 30 Milyan oo Euro una dhiganta 23.4 Milyan oo ginni.
Sida lagu daabacay wargeyska Marca macalinka cusub ee Man United Jose Mourinho ayaa xiiseynayo xidigan waxa uuna isku dayayaa sidii uu ku keeni lahaa gegida caanka ah ee Old Trafford, ku dhawaad 50 Milyan ayey diyaar la yihiin kooxda Man United.
United ayaa sidoo kale lala xiriirinaa saxiixa weeraryahanka reer Sweden Zlatan Ibrahimovic halka ay maanta duhurnimadii dhameystirtay saxiixeedii ugu horeeyey waxa ayna Villarreal kala soo wareegtay daafaca u dhashay dalka Ivory Coasta Eric Baily.